यस्ती छिन् सनी लियानकी ‘स्टुडेन्ट’ | Screennepal
यस्ती छिन् सनी लियानकी ‘स्टुडेन्ट’
२०७१, ३ श्रावण शनिबार ०७:१९screennepalbollywood, feature0
मम्बई, (एजेन्सी) । बलिउड फिल्म उद्योगलाई ठूलै मानिन्छ । यहाँ को आउँछ ? को जान्छ ? यकिन हुँदैन । तर, हिजोआज बलिउडमा रकलप्रिति सिंहको चर्चा चुलिएको छ । फिल्म ‘यारिया’ को गीत ‘ब्लु है पानी–पानी’ मा जल्वा देखाएपछि यिनी चर्चामा आएकी हुन् ।
यसअघि तेलगु फिल्ममा व्यस्त रकुलका लागि यो पछिल्लो बलिउड इन्ट्री दमदार देखिन्छ । उनी सनी लियोनकी ‘स्टेडेन्ट’ बन्दैछिन् । यस फिल्ममा सनी शिक्षिकाको भूमिकामा देखिनेछिन् । सनीकी विद्यार्थी हुनेछिन्, रकुलप्रिति । सनीले रकुललाई पाठ के सिकाउँछिन् ? त्यो फिल्म चलेपछि थाहा हुन्छ ।
दिल्लीमा बस्दै आएकी रकुल यसअघि दक्षिण भारतीय फिल्ममा आफ्नो सुन्दरता र अभिनयले दर्शकको मन जित्न सफल भइसकेकी छन् । यी सुन्दरीले सन् २०११ को ‘मिस इन्डिया’ मा ‘मिस इन्डिया टूरिजम क्विन इन्टरनेशनल’ उपाधि जितेकी थिइन् । साथै, ‘फेमिना मिस इन्डिया’ उनलले ‘फेमिना मिस ब्युटिफुल स्माइल’लगायत ‘फेमिना मिस फ्रेस फेस’, ‘फेमिना मिस ट्यालेन्ट’ र ‘फेमिना मिस ब्युटिफुल आइज’ को सबटाइटल पनि जितेकी थिइन् ।
सन् २००९ मा दक्षिण भारतीय फिल्म ‘गिल्ली’ मार्फत अभिनयमा डेब्यु गरेकी रकुल केही वर्ष विज्ञापनमा मोडलिङमा व्यस्त भइन् । अभिनयसँगै मोडलिङमा पनि रुचि राख्दै आएकी रकुलले ‘मिस इन्डिया’ मा पनि सहभागी भइन् । तर, उपाधि जित्न नसकेपछि सन् २०११ मा सिद्धार्थ राजकुमारको अपोजिट भूमिका गरेर फिल्म ‘केरतम’ बाट अभिनयमै केन्द्रित भएकी हुन् । अहिले रकुलले ‘यारिया’ मार्फत बलिउड फिल्ममा पाइला सारेकी छन् । दिव्या कुमार ‘यारिया’ बक्स अफिसमा हिट भयो भने रकुल बलिउडमै जम्नेछिन् ।
Previous Post﻿४७ वर्षीया पामेला पुनः पूर्वप्रेमीको अँगालोमा Next Postके यी कलाकार ठगिएकै हुन् त ?